​HCTV oo hawada Thaicom laga saaray
HARGEYSA-Telefishanka afka Soomaaliga ku hadla ee HCTV, ayaa gebi ahaanba hawada ka maqan muddo, waxana wararka soo baxaya sheegayaan in Shirkadda Thaicom ee saldhiga u ah telefishanada Somalidu ay hawada ka saartay, kadib dacwad ay ka gudbisay xukuumadda Ethiopia.
Masuuliyiinta telefishanka HCTV, ayaa sheegay in dawladda Ethiopia, gaar ahaan maamulka kililka shanaad ee Somalida Itoobiya uu warqad u qoray shirkadda Thaicom isagoo dacwad ka qaba warar uu telefishanku ka baahiyay dhacdadii ka dhacday degmada Gaashaamo oo lagu laayay dad badan oo shacab ah.
Dhacdada telefhishanka HCTV hawada laga saaray, ayaa sidoo kale waxa daba socday in shalay magaalada Wajaale, gaar ahaan daanta Itoobiya lagu xidhay weriyayaal kale, iyadoo si gaar ah loola haray weriyihii ka socday HCTV, halka kuwii kale la soo daayay.
Warku waxa uu intaas ku darayaa in wariyayaashaas loo qaaday dhinaca magaalada Jigjiga ee maamulka Soomaalida Ethiopia, kadibna lagala dhex baxay wariye Mukhtaar Nuux Ibraahim.
Saddexdii wariye ee kale ayaa Somaliland dib loogu soo celiyey, sida ay xaqiijiyeen ururka ay Saxaafadda Somaliland ku midowday ee SOLJA, waxana lala hadhay wariyihii kale oo aan ilaa iyo haatan la aqoosan meesha lagu hayo.
Wararka kasoo baxaya qafaalashada wariyahan, ayaa sheegaya in loo haysto warar ku saabsan dad rayid ah oo dhawaan ciidamada Leyuu Booliska Soomaalida Ethiopia ku laayeen aagga deegaanka Gaashaamo, kuwaas oo wararkii Telefishanka HCTV ka baahiyey ay dawladda Ethiopia si weyn u dhibsatay.